Lufthansa's Eurowings Discover dia nanome mari-pahaizana momba ny Air Operator
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Lufthansa's Eurowings Discover dia nanome mari-pahaizana momba ny Air Operator
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • fampiasam-bola • Vaovao • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Miaraka amin'ny famoahana ny fahazoan-dàlana hiasa sy ny Air Operator Certificate (AOC) nataon'ny Alemana Federal Aviation Authority, ny zotram-piaramanidina vao manomboka Eurowings Discover dia nahavita ny dingana farany teo am-panaovana ny sidina mahaleo tena.
Fanamarihana momba ny Air Operator navoakan'ny Fahefana Federaly misahana ny zotra an'habakabaka alemana ny 16 Jona 2021.
Sidina voalohany amin'ny 24 Jolay avy any Frankfurt mankany Mombasa miaraka amin'ny sidina mankany Zanzibar.
Toerana itodiana fanampiny amin'ny fandaharam-potoanan'ny sidina fahavaratra 2021: Punta Cana, Windhoek, Las Vegas ary Maorisy.
Ankehitriny dia ofisialy izy io: ara-potoana amin'ny fiakarana tampoka amin'ny fangatahana famandrihana fialantsasatra, ny Vondrona LufthansaNy seranam-piaramanidina fialamboly vaovao dia vonona ny hiainga. Miaraka amin'ny famoahana ny fahazoan-dàlana hiasa sy ny Air Operator Certificate (AOC) nataon'ny Alemana Federal Aviation Authority, ny kaompaniam-pitaterana tanora Eurowings Discover Nahavita ny dingana farany tamin'ny diany mankany amin'ny hetsika sidina mahaleo tena. Ny taratasy fanamarinana dia navoakan'ny Alemana Federal Aviation Authority tamin'ny 16 Jona.
“Tsy nety ho tsara kokoa ny fotoana. Afaka mivezivezy indray ny olona amin'ny farany ary vonona hampidina azy ireo any amin'ny toerana tsara indrindra eto an-tany isika rehetra, "hoy i Wolfgang Raebiger, tale jeneralin'ny Eurowings Discover. "Nanangana zotram-piaramanidina izahay tao anatin'ny herintaona monja - tanjona fatratra izay tratrantsika niaraka tamin'ny fanohanan'ny vondrona Lufthansa iray manontolo, ekipa iray manentana ary fiaraha-miasa akaiky amin'ny Alemana Federal Aviation Authority. Tianay ny maneho ny fisaorana feno amin'ny olona rehetra. ”
Eurowings Discover koa no kaompaniam-pitaterana an'habakabaka voalohany indrindra tany Alemana nahazo fahazoan-dàlana tsy manam-petra tamin'ny alàlan'ny lalàna vaovao momba ny fiaramanidina fantatra amin'ny anarana hoe CAMO (Organisation Management Organisation Continuous Airworthiness).
Sidina voalohany mankany Mombasa miaraka amin'ny sidina mankany Zanzibar
Ny sidina vaovao indrindra an'ny vondrona Lufthansa Group dia miainga amin'ny 24 jolay avy any amin'ny toby niaviany tany Frankfurt am Main noho ny sidina voalohany mankany Mombasa miaraka amina serivisy mankany Zanzibar. Amin'ny volana aogositra, ny fandaharam-potoanan'ny sidina dia ho feno toeran-kaleha lavitra lavitra: Ka noho izany, ankoatra ny fahatratrarana indroa isan-kerinandro mankany Mombasa / Zanzibar, manomboka amin'ny volana aogositra dia hisy sidina telo isan-kerinandro mankany Punta Cana ary sidina dimy isan-kerinandro ihany koa Windhoek. Amin'ny volana oktobra, ny Eurowings Discover dia hanidina intelo isan-kerinandro ihany koa mankany Las Vegas sy Maurice.
Ao amin'ny fandaharam-potoanan'ny sidina ririnina 2021, i Bridgetown, Montego Bay ary i Varadero dia hanampy isa telo isaky ny herinandro. Ho fanampin'izany, ny programa sidina dia hitarina manomboka ny volana novambra ho tafiditra ao anatin'izany sidina fohy sy antonony mankany amin'ireo Nosy Canary, Egypt ary Morocco.
Alohan'ny hanombohan'ny asa lavitra amin'ny faran'ny volana jolay dia mikasa ny hampiasa sidina kontinanta voafantina ho fampanofana lena ho an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Lufthansa Group Air Dolomiti (EN) manomboka amin'ny tapaky ny volana Jolay mba hampiakarana tsikelikely ny asa ary hiantohana ny fanombohana milamina amin'ny zotra lavitra.
Ny fiaramanidina dia ahitana fiaramanidina iraika ambin'ny folo farafahakeliny amin'ity taona ity ary hitombo ho 21 ny fiaramanidina amin'ny tapaky ny taona manaraka (10x Airbus A320 sy 11x Airbus A330). Ny fiaramanidina rehetra dia avy any amin'ny dobo filamatran'ny Lufthansa Group.
Noho ny fampidirana tanteraka ao amin'ny tamba-jotra feeder Lufthansa, ireo mpandeha dia handray soa amin'ny fizotran'ny famandrihana farany sy hatramin'ny farany ary ny fifamoivoizana tsy misy fangarony. Ny sidina rehetra dia efa azo amandrihana amin'ny lufthansa.com - eo ambany laharan'ny sidina Lufthansa (LH) izao. Ny fiovana amin'ny laharan'ny sidina Eurowings Discover "4Y" dia kasaina ho amin'ny herinandro amin'ny sidina voalohany.